Rava ny fitiavan-tena sy ny tsy fahatokiana
"Dia raiki-tahotra ny olona rehetra teo, ary fahagagana sy famantarana maro no nataon'ny Apostoly. Ary izay rehetra nino dia niray toerana, sady niombonany avokoa ny fananany rehetra, ary namidiny ny taniny sy ny fananany ka nozarainy tamin'izy rehetra araka izay nilainy avy." - Asa. 2:43-45.
Tsy noho ny fahihiran'Andriamanitra no mahatonga ny tsy filatsahan'ny Fanahy Masina mivatravatra amin'ny fiangonantsika. Ny fiangonana ihany no afaka manova io tsy filatsahany io. Hoy Andriamanitra amin'ny vahoakany: "Mifohaza ary manina fahalianana amin'ny zava-masina." Aiza ny finoantsika? Kolokolointsika amin'ny alalan'ny inona ny fifandraisantsika amin' i Jesôsy Kristy? Manaraka Azy ao anatin'ny fandavan-tena sy fiorenana tsara ve isika? Mizara ny fahamarinana amim-pahendrena ve isika? Rehefa haidin'Andriamanitra amin'ny fiangonana ny Fanahiny, dia hitondra vokatra ho voninahiny ireo fiangonana ireo. Ny sabatry ny Fanahy, izay vao noranitina tamin-kery, dia hanapaka ny andaniny roa.
Misy asa matotra hatao ao amin'ny tanim-boalobok'Andriamanitra. Tsy maintsy hotorina amin'ny feo mahery maneran-tany ny hafatry ny anjely fahatelo. Hamafa ny soritsoritra fandraharahana rehetra mifono fivadiham-pitokiana, sy ny soritsoritra fitiavan-tena rehetra ny fara-orana. Tsy maintsy holevonina ny fanompoan-tsampy rehetra. Aoka harodana avokoa ny alitara rehetra, afa-tsy ilay iray izay manamasina ny fanomezana sy ny mpanome: ny hazo fijalian'i Kalvary.
Misy toerana vaovao tokony hampidirina ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Misy faritra tanimboaloboka ara-panahy vaovao tokony hambolena ho tahaka ny sahan'Andriamanitra. Tokony harovana eo anatrehan'ireo tontolo tsy lavo, sy eo anatrehan'ny tontolo rehetra any an-danitra ny voninahitry ny lalàn'Andriamanitra. Ho avy ny fanenjehana faran'izay mangidy indrindra, kanefa rehefa hitsangana i Ziona ka hitafy ny fitafiany tsara tarehy, dia hamirapiratra amin'ny hatsaran'ny fahamasinana izy. Mikendry ny hananantsika fiainana sy hery betsaka kokoa Andriamanitra, satria efa miposaka amin'ny fiangonana ny voninahiny. Raha raisina ny fahamarinana, dia ho foana ny tsy fahavokarana mahatsiravina. Fiainana mandrakizay ho an'ny mpandray azy ny Tenin'i Kristy. — BTS, 01 Desambra 1903.